Ukuphupha kwesuphavayiza Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Akukho mida kwilizwe lethu lamaphupha. Yintoni engenakwenzeka kwi el mundo okwenyani, okanye mhlawumbi esingakucingi nokukucinga kuthi, ngequbuliso kunokuba yinyani kumaphupha ethu. Umzekelo, sinokuzifumana sikumsebenzi ongenanto yakwenza nayo kwihlabathi elivukayo kwaye apho singenakho ukuseka naluphi na unxibelelwano kunye nesazisi sethu sokwenene ekuqaleni.
Umfanekiso wamaphupha "womkhathaleli" unokuba nendima enjalo kwaye usishiye neempawu zemibuzo emininzi xa sivuka. Nguwuphi umyalezo ofihliweyo ngasemva kwalo mfuziselo wamaphupha kwaye uwubeka njani kwimeko efanelekileyo ebomini? Kubalulekile ukuhlalutya iphupha ukuba umntu ophuphayo uzibona njengomntu okhathalelayo osele ekhulile okanye umgcini womntwana ephupheni okanye ukuba udibene nomntu onjalo.
1 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwilizwe lamaphupha kunokwenzeka ukuba sizibone ngokwethu kwindima yomongi. Mhlawumbi siza kubona ukuba sibakhathalele njani umntu omnye okanye abangaphezulu kwaye sibaxhase. Kutoliko jikelele lwamaphupha, oku kubizwa njalo uphawu oluqinisekileyo itolikwe. Ngaba iphupha elo libonisa ukuba abanye kwihlabathi lokwenyani bayakubona njengomntu oluncedo noluncedo?
Kuxhomekeke ekubeni ngowuphi umntu omkhathaleleyo ephupheni lakho, oku kunokukuvumela ukuba wenze izigqibo malunga nolwalamano esinalo nalo mntu ebomini bokuvuka.
Umzekelo, ukuba sihoya umama wethu okanye umhlobo olungileyo, oku kubonisa ukuba ubudlelwane kunye naye bukuhlabathi iimvakalelo ezinzulu yenziwa. Ngokufanelekileyo namhlanje kukwakho nesizathu sokukhathazeka malunga nokulala, kuba umntu esiphupha ngaye uyagula okanye ukwimeko enzima yobomi. Ngokuzenzekelayo siyazi ukuba le yeyethu inkxaso ifuneka ngokungxamisekileyo.
Uphawu "lwesuphavayiza" lwephupha lunokusibonisa ukuba umntu uzolile ebomini. Uncedo inokwamkela kwabanye. Mhlawumbi umntu ophuphayo ungowohlobo lomntu ocinga ukuba kuya kufuneka ulawule yonke into ngokwakho. Umfanekiso wephupha unokukucela ukuba uphule ngale ndlela yokucinga. Ukuphupha kukuqonda ukuba ayizintloni ukucela uncedo kwabanye.
Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa kwengqondo
"Ukuphatha" umfanekiso wephupha ufuzisela i-subconscious kutoliko lwengqondo ngephupha. ukujongana del phupha malunga ikamva. Isuphavayiza okanye umxhasi unokusebenzisa isimboli yamaphupha ukubonisa uloyiko umntu anokuziva ngokunxulumene nokwaluphala:
Ukwaluphala kuzakubanjani xa sele umdala? Esi sifo sinokukuthintela ekujonganeni nobomi bemihla ngemihla uwedwa. Sele uyazi ukuba ngubani onokumthemba ngexesha likaxakeka? Okanye ngaba ufanele uvume ngokudabukisayo ukuba akukho mntu uzimiseleyo ukukhathalela okanye ukuluququzelela?
Kule meko, iphupha lesuphavayiza linokubangela ukuba ingcinga ilandelwe sisenzo sekhonkrithi. Oko kuthetha ukuba kufuneka uthathe amanyathelo okhuseleko namhlanje ngokungakhathali, nokukhululeka kokwaluphala.
Ngamanye amaxesha iphupha lokuba omnye umntu omkhathalelayo usenokubizwa Isilumkiso ukuba iqondwe. Kuxhomekeka kwimeko yobomi bakho, kungangxamiseka ukuba uzinyamekele ngakumbi kunabanye abantu.
Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolika kokomoya
Kwingcaciso egqithisileyo yamaphupha, "ukongamela" umfanekiso wephupha ufuzisela umnqweno ukukhuselwa ngokomoya y Ukhokelo lukaThixo.